ချယ်လ်ဆီး-မန်ယူတို့ရဲ့ပွဲမှာ ဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေ ရှိမလဲ
ချယ်လ်ဆီး – မန်ယူပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားချက်များ
20 Oct 2018 . 4:51 PM
ဒီတစ်ပတ် ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အကောင်းဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့ ချယ်လ်ဆီးနဲ့ မန်ယူတို့ရဲ့ပွဲဟာ ဒီနေ့ ညနေ(၆)နာရီအချိန်မှာ စတင်တော့မှာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ထူးခြားချက်၊ နှစ်သင်းစလုံးရဲ့ ဒဏ်ရာရ ကစားသမားအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
ချယ်လ်ဆီးနောက်ခံလူ ရူဒီဂါ Rudiger ဟာ ဒဏ်ရာကနေ ပြန်သက်သာလာပြီဖြစ်လို့ အခုပွဲမှာ ပါဝင်လာနိုင်မယ့်အနေအထား ရှိပါတယ်။ အင်္ဂလန်အသင်းအတွက် ပါဝင်ကစားရင်း ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဘာကလေ Ross Barkley ရဲ့ ဒဏ်ရာက ပြင်းထန်မှု မရှိလို့ ဒီပွဲအတွက် ကြံ့ခိုင်မှုပြည့်ဝနေပါပြီ။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ရာသီအစမှာ မန်စီးတီးကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ရှုံးပွဲမရှိတော့တဲ့ မှတ်တမ်းကောင်းကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ ကြိုးပမ်းရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ မန်ယူအသင်းအတွက် သတင်းကောင်းကတော့ ဒဏ်ရာကြောင့် ပွဲတော်တော်များများကို လွဲချော်ခဲ့တဲ့ ဟာရဲရား Ander Herrera ဒီပွဲမှာ ပါဝင်လာဖို့ရှိနေတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့မ ဖယ်လေနီ Fellaini ၊ မာတစ် Matic ၊ တွမ်မီနေး Scott McTominay ၊ လုခ်ရှော Luke Shaw တို့ဟာ နိုင်ငံတကာပွဲတွေအပြီးမှာ ဒဏ်ရာကိုယ်စီ ရခဲ့လို့ ကြံ့ခိုင်မှုပြည့်ဝပ့ါမလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ။ လင်ဂတ် Jesse Lingard ၊ ရိုဟို Marcos Rojo တို့ကတော့ ပါဝင်နိုင်ဖို့ မရှိပါဘူး။
– ၂၀၁၂ အောက်တိုဘာကတည်းက စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျမှာ မန်ယူနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ (၁၆)ပွဲမှာ ချယ်လ်ဆီး (၁)ပွဲပဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး (၁၀)ပွဲနိုင်၊ (၅)ပွဲသရေကျခဲ့တယ်။
– မန်ယူအသင်းရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို (၁၈)ကြိမ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး သူတို့အတွက် ရှုံးပွဲအများဆုံးပြိုင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်။
– ချယ်လ်ဆီးနဲ့ မန်ယူတို့ ဆုံတွေ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲတွေမှာ အ၀ါကတ်စုစုပေါင်း (၂၃၂)ကြိမ် ပြသခံခဲ့ရပြီး ဒါဟာ ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် စံချိန်တင်ပါပဲ။
– ၂၀၀၅-၀၆၊ ၂၀၁၄-၁၅ ရာသီတွေမှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်း ပရီးမီးယားလိဂ် ရာသီအစ (၉)ပွဲဆက် ရှုံးပွဲမရှိ မှတ်တမ်းကို ပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီရာသီတွေမှာ ချယ်လ်ဆီး ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တယ်။
– ပရီးမီးယားလိဂ် အဝေးကွင်းနောက်ဆုံး (၆)ပွဲမှာ မန်ယူ (၃)ပွဲအထိ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး (၂)ပွဲနိုင်၊ (၁)ပွဲ သရေကျခဲ့တယ်။
– မော်ရင်ဟို Mourinho ဟာ ချယ်လ်ဆီးနဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံ (၆)ပွဲ ရင်ဆိုင်ခဲ့တာမှာ (၄)ပွဲအထိ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျမှာ လုံးဝနိုင်ပွဲ မရခဲ့ပါဘူး။
– ဒီရာသီပရီးမီးယားလိဂ် သွင်းဂိုးအများဆုံးအဖြစ် ရပ်တည်နေတဲ့ ချယ်လ်ဆီး တောင်ပံကစားသမား ဟာဇက် Eden Hazard ဟာ (၇)ဂိုးသွင်း ဂိုးဖန်တီးမှု (၃)ကြိမ် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
Photo:The Week UK,The Independent,Racing Post,Soi Keo
ခယျြလျဆီး – မနျယူပှဲနဲ့ ပတျသကျတဲ့ထူးခွားခကျြမြား
ဒီတဈပတျ ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားစရာ အကောငျးဆုံးပှဲဖွဈတဲ့ ခယျြလျဆီးနဲ့ မနျယူတို့ရဲ့ပှဲဟာ ဒီနေ့ ညနေ(၆)နာရီအခြိနျမှာ စတငျတော့မှာပါ။ ဒါကွောငျ့ ဒီပှဲနဲ့ပတျသကျတဲ့ ထူးခွားခကျြ၊ နှဈသငျးစလုံးရဲ့ ဒဏျရာရ ကစားသမားအခွအေနနေဲ့ပတျသကျပွီး ပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ ဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
ခယျြလျဆီးနောကျခံလူ ရူဒီဂါ Rudiger ဟာ ဒဏျရာကနေ ပွနျသကျသာလာပွီဖွဈလို့ အခုပှဲမှာ ပါဝငျလာနိုငျမယျ့အနအေထား ရှိပါတယျ။ အင်ျဂလနျအသငျးအတှကျ ပါဝငျကစားရငျး ဒဏျရာရခဲ့တဲ့ ကှငျးလယျလူ ဘာကလေ Ross Barkley ရဲ့ ဒဏျရာက ပွငျးထနျမှု မရှိလို့ ဒီပှဲအတှကျ ကွံ့ခိုငျမှုပွညျ့ဝနပေါပွီ။ ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ ရာသီအစမှာ မနျစီးတီးကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး ရှုံးပှဲမရှိတော့တဲ့ မှတျတမျးကောငျးကို ဆကျလကျထိနျးသိမျးဖို့ ကွိုးပမျးရတော့မှာဖွဈပါတယျ။ မနျယူအသငျးအတှကျ သတငျးကောငျးကတော့ ဒဏျရာကွောငျ့ ပှဲတျောတျောမြားမြားကို လှဲခြျောခဲ့တဲ့ ဟာရဲရား Ander Herrera ဒီပှဲမှာ ပါဝငျလာဖို့ရှိနတောပါပဲ။ ဒါပမေဲ့မ ဖယျလနေီ Fellaini ၊ မာတဈ Matic ၊ တှမျမီနေး Scott McTominay ၊ လုချရှော Luke Shaw တို့ဟာ နိုငျငံတကာပှဲတှအေပွီးမှာ ဒဏျရာကိုယျစီ ရခဲ့လို့ ကွံ့ခိုငျမှုပွညျ့ဝပ့ါမလားဆိုတာ စဉျးစားစရာပါ။ လငျဂတျ Jesse Lingard ၊ ရိုဟို Marcos Rojo တို့ကတော့ ပါဝငျနိုငျဖို့ မရှိပါဘူး။
– ၂၀၁၂ အောကျတိုဘာကတညျးက စတမျးဖို့ဒျဘရဈချြမှာ မနျယူနဲ့ ဆုံတှခေဲ့တဲ့ (၁၆)ပှဲမှာ ခယျြလျဆီး (၁)ပှဲပဲ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး (၁၀)ပှဲနိုငျ၊ (၅)ပှဲသရကေခြဲ့တယျ။
– မနျယူအသငျးရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ ခယျြလျဆီးအသငျးကို (၁၈)ကွိမျ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး သူတို့အတှကျ ရှုံးပှဲအမြားဆုံးပွိုငျဘကျဖွဈနတေယျ။
– ခယျြလျဆီးနဲ့ မနျယူတို့ ဆုံတှတေဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲတှမှော အဝါကတျစုစုပေါငျး (၂၃၂)ကွိမျ ပွသခံခဲ့ရပွီး ဒါဟာ ပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျ စံခြိနျတငျပါပဲ။
– ၂၀၀၅-၀၆၊ ၂၀၁၄-၁၅ ရာသီတှမှော ခယျြလျဆီးအသငျး ပရီးမီးယားလိဂျ ရာသီအစ (၉)ပှဲဆကျ ရှုံးပှဲမရှိ မှတျတမျးကို ပွနျလညျပိုငျဆိုငျအောငျ ကွိုးစားရမှာဖွဈပွီး အဲဒီရာသီတှမှော ခယျြလျဆီး ပရီးမီးယားလိဂျ ခနျြပီယံဖွဈခဲ့တယျ။
– ပရီးမီးယားလိဂျ အဝေးကှငျးနောကျဆုံး (၆)ပှဲမှာ မနျယူ (၃)ပှဲအထိ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး (၂)ပှဲနိုငျ၊ (၁)ပှဲ သရကေခြဲ့တယျ။
– မျောရငျဟို Mourinho ဟာ ခယျြလျဆီးနဲ့ ပွိုငျပှဲစုံ (၆)ပှဲ ရငျဆိုငျခဲ့တာမှာ (၄)ပှဲအထိ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး စတမျးဖို့ဒျဘရဈချြမှာ လုံးဝနိုငျပှဲ မရခဲ့ပါဘူး။
– ဒီရာသီပရီးမီးယားလိဂျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးအဖွဈ ရပျတညျနတေဲ့ ခယျြလျဆီး တောငျပံကစားသမား ဟာဇကျ Eden Hazard ဟာ (၇)ဂိုးသှငျး ဂိုးဖနျတီးမှု (၃)ကွိမျ ပွုလုပျထားပါတယျ။